Ciyaaryahan Tiger Wood oo ku Dhaawacmay Shil Gaari - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Ciyaaryahan Tiger Wood oo ku Dhaawacmay Shil Gaari
Tiger Woods oo ah halyeyga ciyaarta Golf-ka ee dalka Mareykanka ayaa dhaawac halis ahi Talaadadi shalay kasoo gaaray, shil baabuur oo uu ku galay nawaaxiga magaalada Los Angeles ee gobolka California.
Booliska Los Angeles ayaa sheegay, in baabuurki uu watay Tiger Woods uu dhowr jeer rogmaday ugu danbeyntiina dusha dhulka dhigay.
Wakiilka Woods ayaa sheegay, in wali uu saaranyahay saalada qalliinka, halkaas oo ay dhaqaatiirtu kula tacaalayaan dhaawac u badan jabniin soo gaaray labadiisa lugood.
Telefishinka CNN ayaa ku warramay, in Tiger Woods uusan soo gaarin dhaawac naftiisa khatar gelin kara, balse ay bannaanka u soo baxeen qaar ka mid ah lafaha lugahiisa.
Taliyaha ciidanka booliska Los Angeles ayaa sheegay, in shilka Woods uusan ku lug laheyn baabuur kale.Tiger Woods oo ah 45 jir, ayaa 15 jeer ku guuleystay Koobka Golf-ka ee caalamiga ah.
Next articleDad ku dhintay weerar madaafiic ah